Ahịa akpaaka Software: Key Player na Nnweta | Martech Zone
N'ime ulo oru 142,000 na-eji ngwa ahia eji eme ihe. Isi ihe atọ dị na mbụ bụ ịbawanye nduzi ruru eru, ịbawanye arụmọrụ ahịa, yana mbelata ahịa n'elu. Industrylọ ọrụ na-ere ahịa na-eto site na $ 3 ruo ihe karịrị $ 225 ijeri n'ime afọ 1.65 gara aga
Ndị na-esonụ infographic si Ọnụnọ ahịa akpaaka ahịa na-akọwapụta mgbanwe nke sọftụwia azụmaahịa si Unica karịrị afọ iri gara aga site na ijeri $ 5.5 bara uru nke nnweta nke wetara anyị ugbu a, gụnyere nyiwe akpaaka azụmaahịa ndị a:
Na-aga n'ihu - Ihe eji eme akpaaka ahia nke enyere iji nyere gi aka inweta ihe omuma di nkpa nye ndi ahia gi. Site na mmata ahia na ọgbọ na-achọ, na njigide na iguzosi ike n'ihe, nkà na ụzụ anyị na-enyere ndị na-ere ahịa aka pụọ ​​na asọmpi ahụ ma na-ebute nsonaazụ ka mma.
Adobe Mgbasa Ozi - Otu usoro nke ga - enyere gị aka ịhazigharị ma nyefee mkpọsa gafee ọwa gị niile na ntanetị. Mgbasa ozi nwere ike inye profaịlụ ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi, ịre ahịa ozi ịntanetị na njikwa mmekọrịta oge.
IBM Marketing Ngwọta - Akụkụ nke pọtụfoliyo IBM Commerce, IBM Marketing Solutions na-enyere gị aka isoro ndị ahịa gị na mkparịta ụka dị oke mkpa, mkparịta ụka gafere ọwa dijitalụ, mmekọrịta mmadụ na ibe, ekwentị mkpanaaka na nke ọdịnala. Nwere ike ịhazi ma bulie mkpọsa mgbasa ozi na ahịa ahịa dijitalụ iji tọghata ndị ọbịa n'ime ndị ahịa na ndị nkwado.
Worksps Hubspot - Na-azụ ndị kọntaktị gị na ndị ahịa gị site na ịzụlite ihe mgbaru ọsọ, iduga akara, ọkwa dị n'ime, ọdịnaya websaịtị ahaziri, mgbagha usoro, na nkewa.
IBM Silverpop - Gbanwee mkparịta ụka ahaziri iche na ọnụ ma nyefee ozi dị oke mkpa ma dị oke mkpa yana usoro ọ bụla na ndụ ndị ahịa.
Microsoft - Ewubere site na ala iji dozie nnukwu nsogbu kacha nta nke obere ahia. Y’oburu na ichoro uzo di nma karie ka ị na eto, ikpo okwu Infusionsoft nwere ike inyere aka. Jikwaa ọrụ ndị ị na-eme kwa ụbọchị nke na-eme ka ị ghara ịna-arụ ọrụ ngwa ngwa.
Marketo - Chọta ma tinye ndị ahịa ziri ezi. Nyere ha aka imuta ihe ha choro ima banyere ahia gi dika ha na amalite njem. Mụta banyere ahịa ọchụchọ, ibe ọdịda, nnabata web, ụdị, mgbasa ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ahịa Microsoft Dynamics - Ihe ngosiputa ihe omuma ahia nke ahia ahia, ime atụmatụ, igbu, na nchịkọta gafee ọwa niile-email, dijitalụ, mmekọrịta mmadụ na ibe, SMS, na ọdịnala.
Oracle Eloqua - Na-enyere ndị ahịa aka ịhazi ma mepụta mkpọsa mgbe ha na-enyefe ahụmịhe ndị ahịa ahaziri maka atụmanya ha. Mgbasa ozi dị ukwuu maka ndị na-ege ntị gafee ọwa gụnyere email, nyocha ngosi, vidiyo, na ekwentị. Site na njikwa ndu na usoro mgbasa ozi dị mfe, ihe ngwọta anyị na-enyere ndị na-ere ahịa aka itinye ndị kwesịrị ekwesị na-ege ntị n'oge kwesịrị ekwesị na njem ndị ahịa ha. Ndị otu ire nwere ike imechi ọnụ ahịa ndị ọzọ na ọnụego ngwa ngwa, na-abawanye ROI ahịa site na nghọta oge.
Ahịa Cloudforce Cloud - Salesforce Marketing Cloud na-eme ka azụmaahịa ọ bụla too nke ha na azụmaahịa email ọkachamara. Ọ bụ ezie na ọ bụghị kpọmkwem ngwa ahia eji eme ihe, Salesforce Appexchange nwere mepụtara njikọta na ọtụtụ isi ahịa akpaaka nhazi.
Mgbaghara ahịa - B2B Marketing Automation na-eme ka ndị na-ere ahịa kwa ụbọchị banye na ndị na-enweta ego ha na-enweta ego. Ulo oru akpaka ha na-ere ahia na-enye ahia email, ochichi ndu, ndu ndu, nhazi ahia na akuko ROI.
Teradata Marketing Ngwa - Mezuo ike ahia ahia, ghota ndi ahia dika mmadu n’otu n’otu, ma mezuo nkwukọrịta dijitalụ di ike na uzo nile na ngwa Teradata Marketing.
Automzụ ahịa akpaaka Ọnụnụ na-akọwapụta ụgwọ nkezi ikikere, nke daala ka ọnụọgụ ndị na-asọ mpi rịrị elu. Can nwere ike iji tụnyere ngwa ọrụ azụmaahịa niile bụ isi na 10 sekọnd na ahịa akpaaka Ọnụnụ.
Tulee Ahịa Akpaaka Ngwaọrụ
Tags: Na-aga n'ihuomume-na softwareomeeakụrụngwaadobeaprimoigwe mmadụokwukpachaara anyaGenooonyinyeokpokorohubspot na-arụ ọrụworkspes hubspotIBMazm ahịa azxibm silverpopibm unicaMicrosoftiri na asatọloopfuseahịa ahịaahịa akpaaka ahịaere ahịaahịaahịa ahịamicrosoftmicrosoft ahịa ahịaneolaneakụkọ mkpesaOraclemgbagharaarụmọrụịrị elu nke akpaaka ahịandị ahịaMgbaghara ahịaahịaSilverPopteradatateradata ngwa ahianaanịnnenweta
Jul 20, 2016 na 5: 13 AM
A kediegwu mmebi nke akụkọ ihe mere eme nke ahịa akpaaka na ọ bụ na-adọrọ mmasị ịhụ otú anyị na-na na na-abịa.
Feb 14, 2017 n’elekere 2:16 nke abali
Great list of the top marketing automation softwares.I like infusionsoft kasị ruru ka egwu atụmatụ ọ na-enye.
Salesforce toro nke kachasị site na ịnweta ọtụtụ ụlọ ọrụ.